API -ga ogaanshaha shaqo la’aanta ee Chrome 94 wuxuu dhaliyay mowjado dhaleeceyn ah | Laga soo bilaabo Linux
API -ga ogaanshaha Iidle ee Chrome 94 ayaa dhaliyey mowjado dhaleeceyn ah
Xulka wararka oo dhan | 24/09/2021 22:31 | Noticias
Markii la bilaabay nooca Chrome 94 se sameeyay ka -mid -noqoshada caadiga ah ee API -ga ogaanshaha aan shaqayn, taas oo dhalisay mowjado dhaleeceyn ah oo xiriir la leh diidmo ka timid soo -saareyaasha Firefox iyo WebKit / Safari.
API -ga ogaanshaha bilaa camalka ah waxay u oggolaanaysaa goobaha inay ogaadaan marka isticmaale uu shaqaysto, yacnii, ma la falgalaan keyboard -ka / jiirka ama wuxuu ka shaqeeyaa kormeere kale. API -gu wuxuu kaloo kuu oggolaanayaa inaad ogaato haddii shaashad -ilaaliyaha uu ku shaqeynayo nidaamka iyo in kale. Ogeysiiska wax -qabad la'aanta waxaa la sameeyaa iyadoo la soo diro ogeysiis ka dib marka la gaaro xaddid la'aanta wax -qabad la'aanta ee la go'aamiyey, qiimaha ugu yar oo lagu hagaajiyay 1 daqiiqo.
Waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelato adeegsiga API ee ogaanshaha shaqola'aanta waxay u baahan tahay bixinta cad ee aqoonsiga isticmaalaha, taas oo ah, haddii arjigu isku dayo inuu go'aamiyo xaqiiqda dhaqdhaqaaq la'aanta markii ugu horreysay, adeegsadaha waxaa la tusi doonaa daaqad leh soo jeedin ah inuu oggolaansho bixiyo ama xannibo hawlgalka.
Codsiyada wada sheekaysiga, shabakadaha bulshada iyo isgaarsiinta waxaa lagu magacaabaa codsiyada, kuwaas oo beddeli kartaa xaaladda isticmaalaha iyadoo ku saleysan joogitaankooda kombiyuutarka ama dib u dhigi kara bandhigidda ogeysiisyada farriimaha cusub ilaa imaatinka isticmaalaha.
API ayaa sidoo kale loo adeegsan karaa codsiyada kale si loogu noqdo shaashadda asalka ah ka dib muddo cayiman oo aan dhaqdhaqaaq lahayn, ama lagu curyaamiyo hawlgallo, hawlgallo kheyraad badan leh, sida dib-u-habaynta jaantusyada isku-dhafan oo si joogto ah loo cusbooneysiinayo marka isticmaale uusan ku jirin shaashadda. kombiyuutar.
Mawqifka kuwa ka soo horjeeda awood u yeelashada API ogaansho aan firfircoonayn waxay hoos ugu dhaadhacaysaa xaqiiqda ah in macluumaadka ku saabsan in adeegsaduhu ku jiro kombiyuutarka iyo in kale loo qaadan karo qarsoodi. Ka sokow adeegsiga waxtarka leh, API -kan sidoo kale looma adeegsan karo ujeeddooyin wanaagsan, tusaale ahaan, in la isku dayo in laga faa'iidaysto dayacanka inta uu isticmaalahu maqan yahay ama la qariyo waxqabad xaasidnimo oo muuqda, sida macdanta.
Isticmaalka API ee su'aasha, macluumaadka ku saabsan qaababka dabeecadda ayaa sidoo kale la ururin karaa ee isticmaalaha iyo laxanka maalinlaha ah ee shaqadooda. Tusaale ahaan, waxaad ogaan kartaa marka qofka isticmaala inta badan uu qado tago ama ka tago goobta shaqada. Marka la eego codsiga xaqiijinta oggolaanshaha khasabka ah, Google waxay u aragtaa walaacyadan mid aan khusayn.
Si gebi ahaanba loo joojiyo API -ga ogaanshaha shaqo la’aanta, ikhtiyaar gaar ah ayaa lagu bixiyaa qaybta “Qarsoodiga iyo amniga” ee goobaha (“chrome: // settings / content / idleDetection”).
Sidoo kale, Waa inaan xisaabta ku darsannaa qoraal ka yimid soo -saareyaasha Chrome oo ku saabsan horumarinta farsamooyinka cusub si loo hubiyo maareynta xusuusta badbaadsan. Sida laga soo xigtay Google, 70% dhibaatooyinka amniga ee Chrome waxaa sababa khaladaadka xusuusta, sida adeegsiga kadib helitaanka lacag la’aanta ee kaydka. Saddex xeeladood oo muhiim u ah wax ka qabashada khaladaadka noocaas ah ayaa la aqoonsaday: adkaynta jeegaga waqtiga isku-dubaridka, xannibaadda khaladaadka waqtiga-socodka, iyo adeegsiga luuqad badbaado leh.
Waxaa la wariyey in tijaabooyinku waxay bilaabeen inay ku daraan kartida lagu horumarin karo qaybaha luqadda miridhku ku leeyihiin Chromium codebase. Koodhka miridhku wali kuma jiro isku -darka la siiyay adeegsadayaasha oo ujeeddadiisa ugu weyni waa in la tijaabiyo suurtagalnimada in la horumariyo qaybaha shaqsiyeed ee biraawsarka dhexdiisa oo la dhexgeliyo qaybaha kale ee ku qoran C ++.
Si la mid ah, koodhka C ++, mashruucu wuxuu sii wadaa inuu horumariyo isagoo adeegsanaya nooca MiraclePtr halkii uu ka ahaan lahaa tilmaamayaal cayriin si uu u horjoogsado suurtagalnimada ka -faa'iideysiga nuglaanta ay keento helitaanka baloogyada xusuusta ee hore loo sii daayay, iyo habab cusub ayaa la soo jeediyay si loo ogaado khaladaadka marxaladda ururinta.
Sidoo kale, Google waxay bilaabaysaa tijaabo si ay u tijaabiso maqnaanshaha goobta ee suurtogalka ah ka dib markii biraawsarku gaadho nooc saddex lambar ah halkii uu ka ahaan lahaa laba.
Gaar ahaan, dejinta "chrome: // flags # force-major-version-to-100" ayaa ka muuqday noocyadii tijaabada ahaa ee Chrome 96, markii lagu qeexay cinwaanka isticmaalaha-Wakiilka, nooca 100 (Chrome / 100.0.4650.4. XNUMX) waa la soo bandhigi doonaa. Bishii Ogosto, tijaabo tan la mid ah ayaa lagu sameeyay Firefox, taas oo daaha ka rogtay dhibaatooyin la xiriira maareynta noocyada saddex-lambar ee goobaha qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » API -ga ogaanshaha Iidle ee Chrome 94 ayaa dhaliyey mowjado dhaleeceyn ah
Akira: Codsi asal ah oo furan oo Linux ah oo loogu talagalay naqshadeynta UI iyo UX
Google ayaa hore u bixisay taariikh dhammaadka waafaqsanaanta nooca 2 ee Caddaynta Chrome